ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝ ဖြစ်ရပ်တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝ ဖြစ်ရပ်တဲ့
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝ ဖြစ်ရပ်တဲ့
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Aug 12, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
နိုင်ငံ တကာ က လာရောက် ကြည့်ရှု့ သူတွေ နှင့် စည် ကားနေပြီး တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂျင်ဒိုဆိုတဲ့ ကျွန်း ကလေး တစ် ခုမှာ မိုးစက်ရဲ့အံ့ ဩဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ် ဆန်းကျယ် လို့ ခေါ်ဆိုတဲ့ အလွန် ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ သဘာဝဖြစ်ရပ် တစ်ခုနှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။ တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ်၊ ပင်လယ်ရေ ကျချိန်မှာ အဆိုပါ ဂျင်ဒိုကျွန်းနှင့် မိုဒိုကျွန်း အကြားက ရေပြင်မှာ အရှည် ၂.၈ ကီလိုမီတာ (၁.၇မိုင်ခန့်) နဲ့ အကျယ် ၄၀မီတာ (၁၃၁ပေ ခန့်)ရှိတဲ့ မြေပြင်ပေါ်လာပြီး လူတွေဖြတ်သွားလို့ ရအောင် တစ်နာရီလောက် ကြာအောင် ဖြစ်နေတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသဘာဝ ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ပွဲတော်တစ်ခု အနေနဲ့ ကျင်းပကြပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက လာရောက်ကြသူတွေလည်း နှစ်စဉ် ပါဝင်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်အထိ ပြင်ပကမ္ဘာမှ မသိရှိကြသေးပါဘူး ၄င်းနှစ်မှာ ပြင်သစ်ပြည်က သံတမန်တစ်ဦး တောင်ကိုရီးယားကို လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး နောက် ထိုအကြောင်းကို ပြင်သစ်သတင်းစာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာက သိရှိသွားခဲ့တာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့တခြား ဘယ်နေရာမှာမှ ဒီလိုမရှိဘဲ ထိုဖြစ်ရပ်ဆန်းရဲ့ သမိုင်းကတော့ တစ်ချိန်မှာ ဂျင်ဒိုကျွန်းရဲ့ ရွာကလေးဟာ ကျားဆိုးတွေရဲ့ ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ရွာသားတွေ အားလုံးဟာ အနီးအနားက မိုဒိုကျွန်းကို ထွက်ပြေး ခိုလုံနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် အသက် အရွယ်ကြီးရင့်သူ အဘွားအို တစ်ဦးကတော့ ကူညီမယ့် သူမရှိလို့ နောက်မှာ ကျန်နေခဲ့ရရှာပြီး စိတ်ပျက်အားငယ်စွာနဲ့ သူမဟာ ပင်လယ်စောင့်နတ်မင်းကို တိုင်တည် ရှိခိုးဆုတောင်းခဲ့ရာမှ၊ နတ်မင်းကြီးက ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို နှစ်ခြမ်းခွဲကာ သူမကို သွေးဆာနေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဘေးကနေ လွတ်အောင် မိုဒိုကျွန်းကို ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ် လို့ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီကနေစပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပင်လယ်ရေပြင်ဟာ ကျွန်းနှစ်ကျွန်းကို ကူးပြီး လူတွေဖြတ်သန်း သွားနိုင်အောင် လျော့နည်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုကြသည်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲမို့ လာရောက် ဆင်နွှဲကြပြီး ထိုပွဲတော် အဖြစ်အပျက်ဟာ နှစ်စဉ် မေ ၁၈ရက်မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြောင်း ကိုရီးယားတွေကတော့ နှစ်စဉ် မတ်၊ မေနဲ့ ဇူလိုင်တွေမှာ ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြကြောင်း သိရသည်။ အခုတော့ ပိုမိုများပြားလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကြောင့် ပွဲတော်ကို ဧပြီမှာလည်း ကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
original Link လေးပါ – http://www.yoyarlay.com/international-news/international-news/asia/11152-2011-08-11-07-25-33
ထူးဆန်းပါပေတယ် .. ဒီမှာလည်း ရှိတယ် ကြားဖူးတာပဲ.. အင်းတော်ကြီးမှာလေ …ပွဲတော်ရက်ဆို … နတ်လမ်းပေါ်လာပြီး လူတွေ ကူးလို့ရတယ်ပြောတယ် ။ မရောက်ဖူးပေမဲ့ ကြားဖူးတာ… အခုနောက်ပိုင်း လူတွေက ဥာဏ်ရှိစွာနဲ့ နတ်လမ်းပေါ်လာတဲအချိန် အဲ့ဒီအပေါ်က ချက်ချင်း ကွန်ကရစ်လောင်းလိုက်တယ်လေ.. ။ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေပဲ ။
အင်းတော်ကြီးအကြောင်းလေး စုံစုံစေ့စေ့သိရအောင်တင်ပေးပါအုံးလား AKKOေ၇။
ကိုရီးရားက အဲဒီအကြောင်းလေး ဟိုးတုန်းက ကြားခဲ့ဘူးတယ် အခုမှ စုံစုံလင်လင်သိရတော့တယ်။
ဗဟုသုတရစေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျား။ အဲ DVB က တခါလွှင့်ဘူးတဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံက
မြို့လေးတမြို့မှာ မျဉ်းကြောင်းလေးဆွဲထားပြီး … မျဉ်းရဲ့ဒီဘက်ကနေ့ဆိုရင် ဟိုဘက်ကပ်ရက်က ည ဖြစ်
နေပုံလေး လဲ ထပ်ပြီး အသေးစိတ်သိချင်ပါသေးတယ် သိသူများ ပြောကြပါလား။
အင်းတော်ကြီးက နတ်လမ်းပေါ်တယ် ဆိုတာ ကြားဖူးပေမဲ့ တခါမှ မရောက်ဖူး မမြင်ဖူးသေးဘူး။
ကိုရီးယားက လမ်းလေး ဖြစ်တဲ့ ဟာလည်း ကြားဖူးတယ်။ မရောက်ဖူးသေးဘူး။
ပြည်တွင်းက အင်းတော်ကြီးကတော့ ရောက်ဖို့ အခွင့်အလန်း ပိုများတယ် ထင်တယ်။
ရောက်ဖူးတဲ့လူတွေ ပုံလေးဘာလေး မျှဝေပါလား ကြည့်ရအောင်။
Can I get the English name for these islands? I’d like to read more detail on the Internet.
Moses miracle of Jindo Island လို့ရေးကြပါတယ် ။
This isanatural phenomenon that’s very magical. This is related to the story of Moses Miracle. This phenomenon happened in Korea. The ginseng country. This phenomenon happened twice inayear.occurs during low tide. In that time, the land open along 2.8 kilometers, and 40 meters wide. This road connecting the island of Jindo and modo forafew hours. It’s kind of miracle, when you saw the sea and directly split into two parts and we can walk along this road. Like in the Moses Miracle story.
There isaritual or festival doing when the phenomenon happen.This phenomenon is attended by millions of people from various parts of the world. At first no one knew about this phenomenon until 1975. At that time, Mr. Pierre Randi, as French ambassador for Korea visited this places and published in French newspapers.
There isalegend behind this phenomenon. The Korean people tells ofaJindo village was attacked byatiger and all the villagers fled and took refuge on the Modo island.But there was an old woman who left the village group. In the despair, he prayed to god to be reunited with his family. And the God granted her prayer by opening up the road at sea level and helped the old woman escaped fromawild tiger’s. what
courtesy of http://img.xcitefun.net
Jindo Island, in South Korea, is host to one of the world’s most amazing natural phenomenons, called the Moses Miracle. Two timesayear, at the beginning of May and in the middle of June, the waters between Jindo and Modo islands split and createacauseway 2.8 km (1.7 miles) long and 40 meters (131 feet) wide. The path lasts for roughly an hour and allows people from both places to meet halfway and celebrate.
A festival is dedicated to this natural wonder and people from all around the world attend every year. However the Moses Miracle was largely unknown until 1975, whenaFrench ambassador visited South Korea and wrote about inaFrench Newspaper.
– The festival named Jindo Sea Parting Festival usually takes place three timesayear in March, May and July. However with the growing tide of enthusiast tourists the festival is decided to be held in the month of April also.
– For capturingagrand view of the sea dividing in two halves and makingapathway, one can enjoy it either by climbingahill or you can also takeastroll through the revealed seaway. The Moses Miracle of Jindo is something which should really be experienced in person.
– The Festival events related to the Moses Miracle of Jindo are thoroughly relished by millions of visitors. The Jindo folksongs and the special Korean dance named Ganggangsullae are performed and enjoyed by professionals and visiting tourists alike.
– Other attractions of the Moses Miracle of Jindo comprises ofafirework display, laser beam show, an outstanding performance by the Korean Shamanists, andatraditional musical extravaganza along withadrum performance.
အီဂျစ်ဘုရင်ဖေယောင် (အမှတ်စဉ်မသိပါ)နိုင်းမြစ်နှစ်ခြမ်းခွဲမြှပ်ခံရတာ လဲဖတ်ဖူးပါတယ်။ခုက ကိုးရီးယားမှာနှစ်တိုင်း မေ ၁၈ ဆိုဖြစ်နေပီဆိုတော့ ပထဝီအရဖြစ်နေတယ်လို့ ဘဲယူဆရမယ်ထင်တယ်နော်
တနာရီ 1.7 မိုင်နှုန်းနဲ့ လမ်းလျှောက်မယ်ဆို ရောက်ရုံပဲရှိမယ်။ ရေကျကျခြင်းမလျှောက်ပဲ နာရီဝက်လောက်ကြာမှစလျှောက်မိရင် အဲဒီကျွန်းကို ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပုံထဲ မှာ မြင်ရတာ လူတွေ အများကြီးပဲနော်
ကျွန်တော် ဖြင့် မလျှောက်ရဲပါဘူး ဗျာ
တော်ကြာ အဲဒီလူအုပ်ကြီး နဲ့ လျှောက်နေတုန်း
ပြေးပေါက်မှားပီ ဆရာ ၊ ဖြစ်လောက်တယ်နော်
How about Kyeik kha mee?
Who know about it? Please!